अनौठो परीवार:घरको चार जना सदस्य चारै जना तेस्रो लिंगी,कसरी भयो यस्तो ?(भिडियो हेर्नुहोस्) – GALAXY
अनौठो परीवार:घरको चार जना सदस्य चारै जना तेस्रो लिंगी,कसरी भयो यस्तो ?(भिडियो हेर्नुहोस्)
लि’ङ्गको कुरा गर्दा हामी महिला र पुरुष भनेर बुझ्दै आएका छौ तर पछिल्लो समय ते’स्रो’लि’ङ्गी मानिसहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ जो शारीरिक रुपमा न महिला न पुरुषको अबस्थामा हुन्छ्न ।
सुरुसुरुमा ते’स्रो’लि’ङ्गी मानिसहरु हुन्छन भनेर स्विकार्न नै पछि पर्ने हाम्रो समाजमा अहिले भने सरकारले नै ते’स्रो’लि’ङ्गीलाई समेट्ने खालको नीति ल्याएकोले केही हदसम्म मान्छेहरुले ते’स्रो’लि’ङ्गीलाई हेर्ने नजरमा परिबर्तन भएको छ तर पनि उनिहरु अझै हे’पि’ने र हे’लाको दृष्टिकोणले हेरिन भने अझै छाडिएका छैनन । आजको बिषय यस्तै एक ते’स्रो’लि’ङ्गी महिलाको स’ङ’घ’र्ष’पुर्ण जिबनसग आधारित छ ।
नवलपरासी जिल्लाको बर्धाघाट नगरपालिका घर भइ बसोबास गर्दै आएकि जया थापा मगर नाम गरेकि एक ते’स्रो’लि’ङ्गी महिला जो टिकटक लगायतका सामाजिक सन्जालमा पनि पछिल्लो समय भा’इ’र’ल छिन उनी आज मिडियासामु आएकी छिन ।
ते’स्रो’लि’ङ्गी समूहलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेकि उनले समाजमा ते’स्रो’लि’ङ्गी ब्यक्तिहरुको भिन्दै पहिचान बनाउन पनि सफल भएकी छिन र उनी निरन्तर ते’स्रो’लि’ङ्गी मानिसहरुको हकहितको लागि ल’ढ्’दै आएकीछिन ।
उनले बिबाह लगायत थुप्रै धार्मिक कार्यक्रमहरुमा पनि आफ्नो उपस्थिती जनाउदै आएकी छिन र उनले त्यहा गएर आशिर्वाद दिनेजस्ता काम पनि गर्दै आएकीछिन, उनले त्यहा बोलेका कुराहरु र गरेका क्रियाकलापहरुले सामाजिक संजालमा राम्रो पकड जमाउन सफल भएको छ ।
कोमल हृदय अनि राम्रो बानिब्यबहार भएकी उनि सबैको मन जित्न पनि सफल भएकी छिन । सबैको मन जित्न सफल उनै जया मगरलाई बिबाहको समेत प्रस्ताव आउने कुरा उनले बताइन । तर बिबाह उनको भाग्यमै नभएको कुरो हो भन्दै चि’त्त बुझाउछिन उनी ।
एकदमै राम्रो बिचार छ उनको । उनको अनुसार माया भनेको सम्मान हो । समाजमा ते’स्रोलि’ङ्गी समुदायको अ’स्तित्व जोगाउन स’ङ’घ’र्ष’शि’ल छिन उनी र यसै कामले सबैसामु परिचित । हाल उनी उनको गुरुआमा लगायत आफ्ना २ चेलाहरु गरि चारजना बस्दै आएका छन ।
१४ बर्ष पुगेर १५ लागेपछी आफू ते’स्रो’लि’ङ्गी हु भन्ने थाहा पाएकि उनले त्यो समयमा निकै मु’स्कि’ल भएको पनि बताइन । आजभन्दा २० बर्ष अगाडीको कुरा जतिबेला ते’स्रो’लि’ङ्गी भन्नेबित्तिकै मान्छेको हेर्ने नजर नै भिन्न किसिमको थियो, निकै दु’ख अनि क’ष्ट भो’ग्नु’परेको बताउछिन उनी ।
तर अहिले भने ते’स्रो’लि’ङ्गीप्रती मान्छेले गर्ने व्यबहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै परिबर्तन आएको पनि उनी बताउछिन । बिबाह लगायतका थुप्रै धार्मिक एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भै नाचगानसमेत गर्दीरहिछिन उनी ।
खुसी बाढ्दा र अरुलाइ खुसि हुँदै आशीर्वाद दिदा निकै खुसि हुने गरेको कुरा पनि उनले बताइन । निकै नै रमाइली छिन उनी एकदुईवटा गीत गाएर पनि सुनाइन उनले । सबैले यसरी माया अनि सम्मान दिदा निकै नै खुसी लाग्छ भनिन उनले ।
यी त सुखका कुरा भए, सुखसगसगै उनका दु’खका कथा अनि कहानीहरु बेग्लै छ्न । थाम्न सकिनन उनले आफ्ना आखाबाट आ’सुका थोपाहरु ।
रमाइलो गरेर हिड्दा कतिपटक भने मान्छेहरूले पुलिस बोलाइदिने र कम्प्लेन गर्दिने जस्ता काम पनि गरेको भनदै निकै चि’त्त दु’खा’इन उनले । स’डे’को अण्डाले हा’न्ने, ज’ले’को सिग्रेट्ले पछाडिबाट झो’स्दि’ने जस्तासम्मका ह’र्क’त भएको भन्दै निकै लामो गु’ना’सो गरिन उनले । निकै नै अ’न्या’यअ’त्या’चा’र सहेको र स’ङ’घ’र्षपश्चात् उनि आजको अबस्थामा आएको बताउछिन उनी । खै कहिले बुझ्छ हाम्रो समाजले तेस्रोलिङ्गी पनि मानिस नै हुन र उनिहरुको पनि मन छ भनेर ।बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा: